U-Ed Bastian: IDelta Air Lines ithatha ezinye izinyathelo ukuvikela ikusasa lethu
Mashi 18, 2020 0 I-4 min ifunde
Isikhulu esiphezulu seDelta Air Lines, U-Ed Bastian, namuhla ithumele imemo elandelayo kubasebenzi bezindiza, maqondana nomthelela wobhubhane we-COVID-10 kulowo ophethe:
Ku: Delta Ozakwethu Emhlabeni Wonke
Kusuka ku: Ed Bastian, CEO
Isihloko: Ukuvikela Ikusasa Le-Delta
Njengoba ubhubhane lwe-COVID-19 (coronavirus) luqhubeka emhlabeni jikelele, umthelela walo kithi ibhizinisi iyaqhubeka ikhula. Ukuqukatha leli gciwane, ukusatshalaliswa kwezenhlalo sekwandile futhi sekwenziwa neziqondiso ezintsha zokuhamba, manje okuhlanganisa nezizwe ezingaphezu kuka-40 emhlabeni jikelele.
Okokuqala nokubaluleke kakhulu, ngifuna ukukhumbuza wonke umuntu ngokubaluleka kwempilo yakho nokuphepha. Kuphephile ukuhamba, kodwa qiniseka njalo ukuthi uthatha izinyathelo ezidingekayo ukuqinisekisa impilo yakho neyamakhasimende ethu nabantu bethu. ICDC inemihlahlandlela ebalulekile etholakalayo, ngakho-ke sicela ulandele zonke izindlela zokuqapha ezidingekayo.
Ukulandela isimo esiphuthumayo sikazwelonke esamenyezelwa nguMongameli wase-US, isidingo sokuhamba sehle kakhulu. Imali engenayo yenyanga kaMashi manje kulindeleke ukuthi yehle cishe ngamaRandi ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-2 ngaphezulu konyaka owedlule, njengoba ukuqagela kwethu ngo-Ephreli kwehla kakhulu. Ngakho-ke, sizoqhubeka nokwenza ukunciphisa okukhulu umthamo ngamaphesenti angama-70 okudonswa kohlelo okubanzi okuhleliwe kuze kube yilapho isidingo siqala ukuthola kabusha. Ukusebenza kwethu kwamazwe omhlaba kuzothatha ukuncishiswa okukhulu kunakho konke, ukwehliswa kwamaphesenti angaphezu kwama-80 ezindizeni ezinyangeni ezimbili kuya kwezintathu ezizayo.
Siba nezingxoxo ezakhayo neWhite House neCongress, futhi sihlalele ethembeni lokuthi imboni yethu izothola ukwesekwa ukusiza ukuxazulula le nkinga. Lokho kusho ukuthi, kufanele siqhubeke nokuthatha zonke izindlela zokuzisiza ezidingekayo. Ukonga imali kuhlala kuyinto yethu eseqhulwini kwezezimali njengamanje. Ukwenza izinqumo ezisheshayo manje ukunciphisa ukulahleka nokugcina ukheshi kuzosinikeza izinsizakusebenza zokubuyela kolunye uhlangothi lwale nkinga futhi kuvikele ikusasa leDelta.
Sibuyisela emuva cishe yonke imali esiyisebenzisile, kufaka phakathi konke ukulethwa kwezindiza okusha, kuze kube yilapho sesicaciseleka kangcono isikhathi nobukhulu besimo.
Ngaphezu kwalokho, sibheke ukuvikela imali engaphezulu kwamaRandi ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-4 kwikota kaJuni kuphela. Lokhu kuzobandakanya ukonga okuphathelene namandla njengoba simisa ukundiza, futhi sibheke futhi ukwehliswa kwezindleko kusuka:
Zonke Delta Izikhulu zizokhipha amaholo ngo-50 wamaphesenti ngoJuni 30, nabaqondisi kanye nabaqondisi abaphunguliwe bathathe amaphesenti angama-25 ngaleyo nkathi efanayo.
Njengoba ngishilo evikini eledlule, nginqume owami umholo ngamaphesenti ayi-100 ezinyangeni eziyisithupha ezizayo. IBhodi labaQondisi bakhethe ukudela ukunxeshezelwa kwabo ezinyangeni eziyisithupha ezizayo.
Njengoba amakhasimende ambalwa endiza, sidinga indawo encane ezikhumulweni zezindiza. Phakathi kweminye imizamo, sizohlanganisa okwesikhashana izakhiwo zezindiza e-Atlanta nakwezinye izindawo lapho kudingeka khona futhi sivale iningi lamaKlabhu wethu we-Delta Sky kuze kube yilapho isidingo silulama.
Sinciphisa ubukhulu bethu bemikhumbi ngokupaka okungenani uhhafu wemikhumbi yethu - izindiza ezingaphezu kwama-600. Sizophinda futhi sisheshise ukuthatha umhlalaphansi kwezindiza ezindala njenge-MD-88/90 yethu kanye namanye ama-767 ethu.
Sinciphisa noma yikuphi ukuchitha imali yesondlo okungadingekile ukusekela ukuphepha kokusebenza kwethu.
Sinciphise ukusetshenziswa kwemali kosonkontileka abaningi, ngaphandle kwalapho kudingeka khona ukuxhasa lo msebenzi.
Amaqabunga okuzithandela angenye yezindlela ezinhle kakhulu futhi ezisheshayo ongasiza ngazo njengoba silwela ukuvikela imisebenzi nokukhokha. Ngifuna ukubonga ngamunye wabantu ababalelwa ku-10,000 XNUMX baseDelta asebevele bevolontiya futhi ngiyanxusa wonke umuntu, ikakhulukazi abasebenzi bethu bokufaneleka, ukuthi bacabangele ukuthi ikhefu lesikhashana linengqondo yini kuwe nomndeni wakho njengamanje. Sicela ukhumbule ukuthi uzoqhubeka nokuthola izinzuzo zakho zezempilo nezindiza ngenkathi usekhefini.
Njengoba senza umsebenzi wethu phansi, ngiyazi ukuthi kubuhlungu kanjani ukushaya “inkinobho yokumisa isikhashana” ezintweni eziningi ezingumgogodla walokho esikwenzela amakhasimende ethu nenhloso yethu yokuxhuma umhlaba. Kepha okungasoze kwaphela umoya wabantu baseDelta, okhanya ngokugqama kunanini ngaphambili nakulesi sikhathi esimnyama. Ngithole amakhulu ama-imeyili nemiyalezo evela kozakwethu be-Delta kuleli sonto eledlule, futhi ukuzimisela kwakho, ukuzibophezela nokuzethemba kwakho ngekusasa lethu kuyakhuthaza impela.
Ikakhulukazi ngifuna ukubonga ithimba Lezokubhuka kanye Nokunakekelwa Kwamakhasimende, elenza umsebenzi omangalisayo wokuphatha izingcingo ezingakaze zibonwe nangokunakekela amakhasimende ethu adinga ukulungisa izinhlelo zawo zokuhamba.
Ungalenzi iphutha - sizodlula kulokhu. Lena inkinga yezempilo yesikhashana futhi isiphetho, ngethemba ukuthi sizofika maduze. Ungalokothi uwabukele phansi amandla okuvakasha njengesevisi ebalulekile emhlabeni wethu. Wonke umsebenzi wethu kule minyaka eyishumi edlule ukuqinisa yethu inkampani futhi ukuguqula imodeli yethu yebhizinisi kuzosisebenzela kahle emasontweni nasezinyangeni ezizayo, njengoba sikhuthazela futhi, ekugcineni, silulama.
Sicela uqhubeke nokwenza impilo nokuphepha komunye nomunye kanye namakhasimende ethu kube yinto yethu ephambili. Lapho kungenzeka khona, sishukumisela ukuthi abantu bethu basebenze ukude ukunciphisa ubungozi bokudlulisela. Kulabo abasebenza kulo msebenzi, qhubeka njalo ulandela imihlahlandlela yethu yokuphepha nokuvikela ukunciphisa iziphazamiso, futhi ushayele isikhathi sokuphepha lapho sidingeka. Futhi sicela uqaphele ezimpilweni zakho ukuthatha izinyathelo zokuzivikela wena kanye nabathandekayo bakho, kufaka phakathi ukuqhela kwezenhlalo nokwaziwa kwalabo abasengozini kakhulu, kubandakanya asebekhulile nalabo abanempilo ebuthaka. Yazi ukuthi uma udokotela ekululeka ukuthi uhlale ekhaya ngoba kungenzeka ukuthi uvezwe yi-COVID-19, uzokhokhelwa futhi ngeke kudingeke ukuthi udonse leso sikhathi ebhange lakho le-PPT.
Ngiyazi ukuthi wonke umuntu ukhathazekile ngokuphepha kwemisebenzi yakho nokukhokha. Ngenxa yokungaqiniseki ngobude bale nkinga, okwamanje asikafiki ezingeni lokuthatha izinqumo. Futhi lezo izinqumo ezibuhlungu kakhulu okufanele uzicabangele. Kepha yazini ukuthi ukubaluleka kwami ​​kweNombolo 1 kuninakekela kakhulu nonke. Kule ndawo engalindelekile asikwazi ukuthatha noma yiziphi izinketho etafuleni, kepha noma yiziphi izinyathelo ezingathinta imisebenzi yakho noma ukhokhe amanani kungaba yinto yokugcina esingayenza, futhi kuphela uma kunesidingo sokuvikela ikusasa lesikhathi eside seDelta.
Ngizobuye ngithinte futhi ngasekupheleni kwesonto ngezibuyekezo ezingeziwe njengoba sizulazula ndawonye. Siyabonga ngakho konke enikwenzelana nina, nokwenzela amakhasimende ethu, kanye nemiphakathi yakho nabathandekayo bakho kulesi sikhathi esingakaze sibonwe.
Okuningi ku-: Delta Air Lines | Covid-19 | White House | CDC | Atlanta
Umthelela wentsha efutha i-nicotine empilweni yengqondo Covid-19|
Amasosha aseSri Lanka manje angakwazi ukudubula ngokuthanda kwakhe ngemuva kwezibhelu ezibulalayo Covid-19|
I-LGBTQ+ Travel Survey yangemva kobhubhane ithola i-CETT Alimara Award Covid-19|
AtlantaCDCCovid-19Delta Air LinesWhite House
Inzuzo yonke yeCopa Holdings yehla isuka ku-$89.4 million yaya ku-$19.8 million
Umsebenzi wokwenza izivumelwano zokuvakasha nezokuvakasha wehle ngo-28.1% ngo-April 2022
Previous Uhulumeni waseSwitzerland uyeke ukukhipha ama-visa wokungena, aqinise ukulawulwa kwemingcele
Olandelayo Yini iCoronavirus? Ukuhamba ngezinyawo eMelika e-Arches National Park e-Utah